Drostanolone Propionate Powder 99% သန့်ရှင်းမှု DP Masteron Steroid သည် ကြွက်သားရရှိရန်အတွက် CasNO.521-12-0
ပို့ကုန်စျေးကွက်-အမေရိကန်၊ ယူကေ၊ ပြင်သစ်၊ စပိန်၊ ထိုင်း၊ ဘရာဇီး…
အလင်းတန်း-Drostanolone Propionate DP Masteron Steroid၊ Drostanolone Propionate Powder
Drostanolone Propionate ၏ ရှင်းလင်းချက်
ထုတ်ကုန်အမည် Dromostanolone propionate
CAS နံပါတ် ၅၂၁-၁၂-၀
မော်လီကျူးအလေးချိန် 360,530 ဂရမ် · mol − ၁
သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း။ 98% Min
စံ USP၊ CP
ပေးပို့နည်း EMS၊ DHL၊ TNT၊ FedEx
Drostanolone Propionate အသေးစိတ်
Masteron (Dromostanolone propionate) သည် steroid drostanolone propionate ပါ၀င်သော ထိုးဆေးပြင်ဆင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။Drostanolone သည် များသောအားဖြင့် အထူးသဖြင့် 2alpha-methyldihydrotestosterone ၏ dihydrotestosterone ၏ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ယင်းကြောင့်၊ ဤစတီရွိုက်၏ဖွဲ့စည်းပုံသည် အလယ်အလတ် anabolic/အစွမ်းထက်သော အန်ဒရိုဂျင်၏အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပြီး အီစထရိုဂျင်ကို အနံ့မခံနိုင်ပေ။ရေထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် gynecomastia တို့သည်ဤဒြပ်ပေါင်းအတွက်စိုးရိမ်စရာမဟုတ်ပါ။ဤနေရာတွင် အီစထရိုဂျင်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် တရားခံဖြစ်သည်မှာ အံ့သြစရာမဟုတ်ပေ။Masteron (Dromostanolone propionate) သည် aromatase နှင့် ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် အခြားအလွှာများနှင့် ပြိုင်ဆိုင်ကာ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်တွင် ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်စေသည့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြသနိုင်မည်ဖြစ်သည်။၎င်းသည် Masteron (Dromostanolone propionate) သည် ပါးစပ်မှ စတီးရွိုက် Proviron ကြောင့် တူညီသောပုံစံဖြင့် လုပ်ဆောင်သော အခြားသော စတီးရွိုက်များ ၏ စျေးနှုန်းကို လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဤဒြပ်ပေါင်းနှင့်အတူအသုံးပြုထားသော propionate ester သည် ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရက်အနည်းငယ်ကြာအောင် သက်တမ်းတိုးစေမည်ဖြစ်သည်။ထိုကဲ့သို့ လျင်မြန်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော အချိန်အတိုင်းအတာဖြင့်၊ ထိုးဆေးများသည် သွေးအတွင်းရှိ ဟော်မုန်းပမာဏကို ထိန်းထားရန် နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် အနည်းဆုံး သုံးရက် သို့မဟုတ် လေးရက်တိုင်းတွင် ထပ်ခါတလဲလဲ ပြုလုပ်လိုပါသည်။၎င်းကို ၎င်း၏ အစွမ်းသတ္တိနည်းသော (50mg/ml) ဖြင့် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ခြင်းဖြင့်၊ အမျိုးသားများသည် Masteron 2ml (တစ်ရာမီလီဂရမ်) ကို နှစ်ရက် သို့မဟုတ် သုံးရက်တိုင်း မကြာခဏ ထိုးပေးကြသည်။အကျိုးဆက်အနေဖြင့် အပတ်စဉ်သောက်သုံးသောပမာဏသည် အံ့ဖွယ်ဆုလာဘ်များရရှိရန် လုံလောက်သည်ထက် 200350mg စုဆောင်းမှုတွင် အကျုံးဝင်ပါသည်။ပြပွဲမစခင်လေးမှာ တချို့အမျိုးသမီးတွေက ဒီပစ္စည်းကို အသုံးပြုယောင်ဆောင်ကြပေမယ့် တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အန်ဒရိုဂျင်ကို ထောက်ခံအားပေးဖို့ သဘာဝက တကယ်ကို များပြားလှပါတယ်။Virilization လက္ခဏာများသည် ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် လျင်မြန်စွာ ရလဒ်ထွက်ပေါ်နိုင်ပြီး Masteron ကို စမ်းသပ်ရန် အလွန်အန္တရာယ်များသော အရာတစ်ခုကို ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ကြိုးစားပါက၊ ဆေးပမာဏကို အပတ်စဉ် 25 မှ 50mg ထက်မကြီးစေရန် ကန့်သတ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။အမျိုးသမီးအားကစားသမားသည် ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း စတီးရွိုက်များတည်ဆောက်ခြင်းကို ရပ်တန့်ရန် ထိုးဆေးများပါ၀င်သော ရက်အရေအတွက်ကို တိုးချဲ့ခြင်းဖြင့် အပိုဆောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါသည်။ဤကိစ္စတွင်၊ Masteron သည်7ရက်တိုင်းတွင်တစ်ခုလျှင်မြန်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။
ယေဘူယျအားဖြင့် Testosterone ၏ လိုလားအပ်သော အကျိုးသက်ရောက်မှု နှစ်ခုကို သင်တွေ့လိမ့်မည် ။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ/ အားကစား အလုံးစုံ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်မှု (ခံနိုင်ရည်၊ ခွန်အား၊ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်း)
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု မြှင့်တင်ခြင်း (ကြွက်သားများ ကြီးထွားခြင်း၊ အဆီကျခြင်း)
စတီးရွိုက်စက်ဝန်းမှတစ်ဆင့် လူတစ်ဦးလက်တွေ့တွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည့် နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသော Testosterone သက်ရောက်မှုများ၏ကျန်၊ ပါ၀င်သည်-
ကော်လာဂျင်ပေါင်းစပ်မှုနှင့် အရိုးတွင်းသတ္တုဓာတ်ပါဝင်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။Collagen သည် ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ရှိ တွယ်ဆက်တစ်ရှူးများ (အရွတ်များ၊ အရွတ်များ၊ အရိုးနုများ၊ အဆစ်များနှင့် အရိုးများ) အတွက် ပရိုတင်းအခြေခံတည်ဆောက်ပစ္စည်းဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။
မိမိကိုယ်ကို လေးစားမှု တိုးစေခြင်း။
ပိုလေးနက်သော (ယောက်ျား) အသံ
ခန္ဓာကိုယ်အမွှေးအမျှင်များ ထူလာခြင်းနှင့် နက်မှောင်လာခြင်း
IGF-1 နှင့် MGF ဟော်မုန်းများ အဆင့်မြှင့်တင်ပေးခြင်း (စျေးကွက်ကြွက်သားများ မြှင့်တင်ပေးခြင်း)
တိုးတက်လာသော ဟေမိုဂလိုဘင် (သွေးနီဥအရေအတွက်)
anti-glucocorticoid အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ကြွက်သားတစ်သျှူးများအပေါ် catabolic ဆန့်ကျင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု
ကျွန်ုပ်တို့ကို ရွေးချယ်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်း
1) သာလွန်အရည်အသွေးနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစျေးနှုန်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် 15 နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံများရှိသောနာမည်ကြီးဆေးဝါးထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီးအမှုန့်အားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ပေးသည်။
2) လျင်မြန်စွာ၊ လုံခြုံပြီး ကောင်းမွန်စွာ ဖုံးကွယ်ထားသော ပို့ဆောင်မှု။
ကောင်းစွာလေ့ကျင့်သင်ကြားပြီး စည်းကမ်းရှိသောထုပ်ပိုးမှုအဖွဲ့နှင့် လုံလောက်သောစတော့ခ်များဖြင့် ပါဆယ်ထုပ်ကို DHL, TNT, FedEx, HKEMS, UPS စသည်တို့ဖြင့် သင့်လက်သို့ လျင်မြန်စွာ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ပို့ဆောင်နိုင်ကြောင်း သေချာစေပါသည်။
3) Export အတွေ့အကြုံရှိသူ။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဖောက်သည်များရှိသည်။ထုတ်ကုန်များကို ဂျာမနီ၊ နော်ဝေး၊ ပိုလန်၊ ဖင်လန်၊ စပိန်၊ ယူကေ၊ ပြင်သစ်၊ ရုရှား၊ အမေရိကန်၊ ဘရာဇီး၊ မက္ကဆီကို၊ သြစတြေးလျ၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဥရုဂွေးနှင့် အခြားနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့ထားသည်။စိတ်ကြိုက်ဖြတ်သန်းနှုန်း ≥99%
4) ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ငွေပေးချေမှုစည်းမျဉ်းများ-
T/T၊ Western Union၊ Money Gram၊ Bitcoin။သင့်အတွက် အဆင်ပြေမယ့် ဝေါဟာရတစ်ခု အမြဲရှိနေမှာပါ။
5) နွေးထွေးသော Customer Service နှင့် After-Sale Service
ပြင်ဆင်ပြီးသည်နှင့် ပါဆယ်ထုပ်၏ ဓာတ်ပုံနှင့် ခြေရာခံနံပါတ်များကို သင့်ထံ ပေးပို့ပါမည်။သင့်မေးခွန်းများကို တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးပါမည်။
After Sales Service ၊
1. မည်သည့်စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို 24 နာရီအတွင်း reply ပြန်လိမ့်မည်။
2. အရည်အသွေး၊ ပံ့ပိုးမှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို အပ်နှံပါ။
3. ကုန်ကြမ်းရွေးချယ်ရာတွင် တိကျစွာရွေးချယ်ပါ။
4. OEM/ODM ရရှိနိုင်ပါသည်။
5. ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစျေးနှုန်း၊ အမြန်ပို့ဆောင်ချိန်။
6. သင်၏အကဲဖြတ်မှုနှင့် ဖော်မြူလာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် နမူနာကို ရနိုင်ပါသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ မည်သည့်ထုတ်ကုန်နှင့် လိုအပ်သောပမာဏကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါ။
စျေးနှုန်းများနှင့် Specifications အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး အတည်ပြုရန် ကမ်းလှမ်းမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်း၊ Western Union၊ Money Gram နှင့် Bitcoin
Express Modes အားလုံး (EMS၊ DHL၊ TNT၊ FedEx၊ UPS စသည်ဖြင့်)
သင်၏ မှန်ကန်ပြီး မှန်ကန်သော ဦးတည်ရာလိပ်စာ အချက်အလက် (ဖြစ်နိုင်လျှင် စာတိုက်ကုဒ်၊ ဖုန်းနံပါတ်) ပေးပါ။
ပမာဏနှင့် ဘေးကင်းမှုဒီဂရီအလိုက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများကို ရွေးချယ်ပါ (စူပါသတိရှိပြီး ကျွမ်းကျင်ပြီး အတွေ့အကြုံရှိသူ)
ငွေပေးချေမှုလက်ခံရရှိပြီး 8 နာရီအတွင်း
ပစ္စည်းများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ရန် ပက်ကေ့ခ်ျဓာတ်ပုံများ ပေးပါမည်။
အလုပ်ချိန် 3-7 ရက် (Door to Door)
ပြဿနာတိုင်းအတွက် 24/7 အွန်လိုင်း
Q1: နမူနာအချို့ကို ရနိုင်ပါသလား။
A: ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခမဲ့နမူနာကို ပေးဆောင်သည်၊ သင်သည် ပို့ဆောင်ခကို ပေးဆောင်ရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။
A: ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ စုံစမ်းမေးမြန်းချက်ကို ပေးပို့ပါ၊ ထို့နောက် ကမ်းလှမ်းမှုကို လုပ်ဆောင်ပါမည်။Western Union၊ Moneygram၊ Bank Account နှင့် Bitcoin မှတဆင့် ငွေပေးချေမှု။ပြီးရင် ပို့ဆောင်ဖို့ စီစဉ်ပေးမယ်။ပေးပို့ပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ခြေရာခံအမှတ်စဉ်ကို ပေးဆောင်ပါမည်။
Q3: ပို့ဆောင်မှု 100% အာမခံပါသလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် 100% ပို့ဆောင်ရေးအာမခံကို ပေးဆောင်ပါသည်။ပါဆယ်ထုပ်များ သိမ်းဆည်းရမိပါက ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
A: ငွေပေးချေပြီး3ရက်အတွင်း ပါဆယ်ထုပ်ကို တင်ပို့ပါမည်။အများအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် EMS၊ ePacket၊ Fedex၊ DHL၊ TNT နှင့် USA ပြည်တွင်း ရောနှောပို့ဆောင်ခြင်း အစရှိသည်တို့ကို အသုံးပြုပါသည်။
A: ဟုတ်တယ်။စျေးနှုန်းညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။သင်လိုအပ်သောပစ္စည်းများနှင့် အရေအတွက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့် လျှော့စျေးကို ပေးဆောင်ပါမည်။
A: အများအားဖြင့် MOQ သည် 100g ဖြစ်သည်။ဒါပေမယ့် ပစ္စည်းတွေနဲ့ မင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီး ငါတို့က 10g၊ 20g၊ 30g ဒါမှမဟုတ် 50g လုပ်နိုင်တယ်။
5 တက်စတိုစတီရုန်း Phenylpropionate CAS: 1255-49-8
7 Testosterone Decanoate ၊ CAS: 5721-91-5
12 ခံတွင်း Turinabol CAS: 2446-23-3
19 Drostanolone Propionate (မာစတာရွန်) CAS: 521-12-0
25 Trenbolone Hexahydrobenzyl ကာဗွန်နိတ် CAS: 23454-33-3
26 Epiandrosterone ဆေး CAS: 481-29-8
34 Toremifene Citrate (ဖာရက်စတန်) CAS: 89778-27-8
40 Cabergoline (Fit) CAS: 81409-90-7
43 Ostarine (MK-2866)၊ CAS: 841205-47-8
57 ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုက် CAS: 431579-34-9
ယခင်- Trenbolone Enanthate Powder လူ့ကြီးထွားမှု 99.68% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု အစွမ်းထက်ဆုံး Anabolic Steroid Tren E CasNO.472-61-5
နောက်တစ်ခု: 99% သန့်ရှင်းမှု Masteron P Powder CAS 521-12-0 Steroid ဆန့်ကျင် Estrogen Drostanolone Propionate
Bodybuilding Powder ရောမွှေပါ။
Masteron P Powder ၊
ဇီဝဖြစ်စဉ်ကို မြှင့်တင်ပေးသော Steroids အမှုန့်
Synthetic Powder နာကျင်မှု
ထိပ်တန်း Notch Boldenone Undecylenate ကုန်ကြမ်း Steroid Su...
တရုတ် စက်ရုံမှ အမျိုးသမီး ဟော်မုန်း Boldenone C...
CAS 13103-34-9 ထိုးဆေးသုံးနိုင်သော Anabolic Steroids Hor...
သန့်စင်သော Boldenone Undecylenate (Equipoise) အစိမ်းမှုန့်...
ကာယဗလလေ့ကျင့်ခန်းအတွက် Boldenone အစိမ်းမှုန့် Steroids...
ထုတ်လုပ်သူ ထောက်ပံ့ရေး အကောင်းဆုံး အရည်အသွေး Steroids Powde...
အရည်အသွေးမြင့် Drostanolone Propionate Steroids P...
Masteron P Top Purity Hormones အစိမ်းမှုန့် Drost...
Anabolics Drostanolone Propionate Cas 521-12-0...
Anabolic Injection Drostanolone Propionate Ster...
Bodybuile အတွက် Drostanolone Enanthate ကုန်ကြမ်းမှုန့်...
ကျန်းမာသော Drostanolone Propionate CasNO.521-12-0 ...
Drostanolone Propionate Steroids Raws Fitne ကိုဝယ်ပါ...
Drostanolone Propionate Powder 99% သန့်ရှင်းမှု DP Ma...
Masteron100 Liquid Anabolic Injection Steroids...